ဖူးနုသစ်: Unofficial Guide to မင်းမဟာဂီရိ
Unofficial Guide to မင်းမဟာဂီရိ
အနော်ရထာမင်း မတိုင်ခင် အချိန်ကာလတုန်းက ပုဂံပြည်မှာ တြံတျစ် အယူူဝါဒ ဆိုတာ ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။ တြံတျစ် အယူဝါဒ ရဲ့ သဘောတရားက ချစ်တာ ကြောက်တာ အစရှိတဲ့ ထင်ရာ မြင်ရာကို ကိုးကွယ်ကြတာပါ။ ဥပမာ အားဖြင့် လူတစ်ယောက်က ကျားကို ကြောက်တယ် ဆိုရင် ကျားရဲ့ ရုပ်ပုံကို ထုပြီးတော့ “ဟဲလို ကျား။ ငါ့ကို မကိုက်နဲ့။ မင်းကို ငါ ကောင်းကောင်း ပသပါ့မယ်။” ဆိုပြီးတော့ ကိုးကွယ် ပါတယ်။ ဟင်္သာလို ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အကောင် ကလေးတွေ တွေ့ပြန်တော့လည်း “ဟေ့ ဟင်္သာ။ မင်းကို ကြည့်ရတာ ရေလည် လန်းတယ်ကွာ။ မင်းကို ကိုးကွယ်ပါ့မယ်။ ငါ့ကို ကံကောင်းအောင် စောင့်ရှောက်ပါ။” ဆိုပြီး အရုပ် ကို ထုလုပ် ကိုးကွယ်တတ် ကြပါတယ်။ အနော်ရထာ ဘုရင် ဖြစ်လာတဲ့ အချိန်မှာတော့ အဲဒီလို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ အရုပ်တွေကို လိုက်သိမ်း ပါတယ်။ ပြီးတော့ “မင်းတို့ထက် မိုက်လို့ ဘုရင်လုပ်တာ။ အနော်ရထာကွ။ ဘာမှတ်လဲ။ မင်းတို့ ငါ့ထက်စွမ်းရင် အပြင် ထွက်ခဲ့ကြ။” လို့ စိန်ခေါ်ပြီး တိုက်တစ်တိုက် ထဲမှာ ထည့်ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်အရုပ်မှ အပြင်ကို ထွက်လာတယ် မကြားမိပါဘူး။ အဲဒီတိုက်ကို နတ်လှောင်ကျောင်း လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အဲဒီလို တြံတျစ်အယူဝါဒနဲ့ ထင်ရာမြင်ရာကို ကိုးကွယ်ကြတဲ့ နေရာမှာ တော၊ တောင်၊ မြစ်၊ ချောင်း စတဲ့ သက်မဲ့ တွေ အတော်များများ ပါဝင် နေပါတယ်။ ပုပ္ပါးတောင် အနီးတဝိုက်မှာ နေထိုင်ကြသူ တွေကတော့ ပုပ္ပါး တောင်ကြီးဟာ သူတို့ အတွက် စားနပ်ရိက္ခါတွေ ပေးတဲ့ ကျေးဇူးရှိတယ် ဆိုပြီး ပုပ္ပါးတောင်ကြီးကို ကိုးကွယ်ကြ ပါတယ်။ ပါဠိဘာသာစကားမှာ မဟာ ဆိုတာ ကြီးမြတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဂီရိ ဆိုတာကတော့ တောင် လို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါတယ်။ အဲဒီတော့ ပုပ္ပါးတောင်ကို အဲဒီခေတ်တုန်းက ကြီးမြတ်သော တောင်ကြီး ဒါမှမဟုတ် မဟာဂီရိလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။
အနော်ရထာ မတိုင်ခင် Long Long ago တုန်းက ပုဂံမှာ သေလည်ကြောင်ဆိုတဲ့ ဘုရင်တစ်ပါး ရှိခဲ့ဖူး ပါတယ်။ သေလည်ကြောင်ရဲ့ လက်ထက်မှာပဲ ပန်းပဲ မောင်တင့်တယ် ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်လည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်ဟာ ကာလသားခေါင်းလိုမျိုး ဖြစ်နေတော့ လူချစ်လူခင် များပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေလည်း အတော်များပါတယ်။ အဲဒီသတင်း ဘုရင့်ဆီကို ရောက်တော့ ဘုရင်လည်း “အင်း။ ဒီကောင် ငါ့ကို ကွိုင်ပူမယ့် ကောင်ပဲ။” ဆိုပြီး တွေးမိပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ မောင်တင့်တယ်ကို နန်းတော်ကို ခေါ်ပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်ကလည်း သူ့ကို သတ်ဖို့ခေါ်မှန်းသိတော့ ပတ်ပြေးနေပါတယ်။ သူ့ကို သွားရှာရင်လည်း လူချစ်လူခင် များတဲ့သူမို့ ဟိုလူက ဖွက်ပေး ဒီလူက ဖွက်ပေးနဲ့ ရှာလို့ကို မတွေ့နိုင်ပါဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ သေလည်ကြောင် အကြံအဖန် လုပ်ပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်ရဲ့ ညီမကို မိဖုရား မြှောက်လိုက်တာပါ။ မောင်တင့်တယ်ရဲ့ ညီမ မဒမ် သေလည်ကြောင် ဖြစ်သွားတဲ့့ အချိန်မှာတော့ ဘုရင်က သူ့ယောက်ဖကို နန်းတော်ကို ခေါ်ခိုင်းပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်လည်း “ငါ့ယောက်ဖကြီး သေလည်ကြောင် ငါ့နှမ ယူထားပြီး ဒီလောက်တော့ မရက်စက်လောက် ပါဘူး။” လို့ တွေးပြီး နန်းတော်ကို သွားပါတယ်။ နန်းတော်ရောက်တော့ သူ့ယောက်ဖက မောင်တင့်တယ်ကို ဖမ်းပြီး မီးရှို့သတ်ပါတယ်။ မဒမ် သေလည်ကြောင်လည်း သူ့အစ်ကို အသတ်ခံရတာကို မကြည့်ရက်လို့ သူမပါ မီးပုံထဲ ခုန်ဆင်းပြီး သေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် သေလည်ကြောင်က လူလည်ကြီး သားသမီးပါ။ မောင်တင့်တယ်ကို သတ်ပြီးတော့ သူ့အတွက် ရန်က မအေးသေးဘူး ဆိုတာကို သိပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်မှာ ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ နောက်လိုက်နောက်ပါတွေ များမှန်းသိတော့ ဒီကောင်တွေ ငါ့ကို ဝိုင်းသမရင် ခက်မယ် ဆိုပြီး မောင်တင့်တယ် ပုပ္ပါးတောင်ကို ရာသက်ပန် အပိုင်စားစေ ဆိုပြီး ပေးကွေျး လိုက်ပါတယ်။ မောင်တင့်တယ်ကို ချစ်ကြတဲ့သူများလည်း မောင်တင့်တယ် ပုပ္ပါးတောင် အပိုင်စား ရသွားတော့ နည်းနည်း ကျေနပ်သွားကြ ပါတယ်။ မဟာဂီရိ ကို အပိုင်စား လိုက်တော့ တြံတျစ်အယူဝါဒ ရှိတဲ့သူတွေလည်း ပုပ္ပါးကို Posting ကျလာတဲ့ မောင်တင့်တယ်ကို မင်းမဟာဂီရိ အနေနဲ့ ရောယောင်ပြီး ကိုးကွယ်ကြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စဉ်းစားစရာ တစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဘုရင်ဆိုတာ ရေမြေ့အရှင် ဖြစ်တယ်လို့ ပြောကြရင်တောင်မှ တိုင်းပြည်ကို သူသေတဲ့ အထိပဲ ပိုင်ပါတယ်။ သူသေရင် နောက်ဘုရင် တစ်ပါးက ဆက်ပိုင်မှာပါ။ သူတောင်မှ ရာသက်ပန် မပိုင်တဲ့ ပုပ္ပါးတောင်ကို မောင်တင့်တယ် ရာသက်ပန် အပိုင်စားစေ လုပ်တာက ဘောင်ကျော် နေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခြားဘုရင်တွေက မောင်တင့်တယ်ကို နယ်ပြောင်းစေလည်း အမိန့်မထုတ်၊ ရာထူးလည်း တိုးမပေး၊ ရာထူးလည်း မချတော့ မောင်တင့်တယ် ပုပ္ပါးမှာပဲ ဆက်ပြီး မြဲနေပါတယ်။ အကယ်၍များ ဘုရင်တပါးပါးက အထွန့်တက်ပြီး မင်းကို ပုပ္ပါးတောင် အပိုင်စား ပေးတာ သေလည်ကြောင်။ ငါမဟုတ်ဘူး။ တခြားနေရာ သွားနေလို့ အမိန့်ထုတ်ရင် မောင်တင့်တယ် ဘယ်နား သွားနေမလည်း ဆိုတာ စဉ်းစားစရာပါ။
အဲဒါကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ အိမ်ထဲမှာ ချိတ်ထားတတ်တဲ့ အိမ်တွင်းအုန်းလို့ ခေါ်ကြတဲ့ အုန်းသီးတွေရဲ့ ပိုင်ရှင် မင်းမဟာဂီရိ အမည်ရ ပန်းပဲ မောင်တင့်တယ်ရဲ့ ရာဇဝင်ပါပဲ။ မောင်တင့်တယ် မီးရှို့ အသတ်ခံရလို့ မီးကို ကြောက်တဲ့အတွက် မီးဖွင့်တဲ့ အချိန်မှာ အုန်းသီးကို လိုက်ကာလေးနဲ့ ကာပေး ရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
Posted by ZT at 8:26 AM
ဒါပေမယ့် ရေးထားတာ သဘောကျတယ်။ ရေးတတ်ပါ့
မီးကြောက်တတ်သူ မောင်တင့်တယ်အဖို့ အမြဲလိုလို မီးပျက်တတ်တဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့တော့ ကွက်တိပါပဲ ကို ဇက်တီ ရယ်။
April 29, 2009 at 8:51 AM
ရာဇဝင်ကို ခေတ်စကားနဲ့ရေးထားတာ မိုက်တယ်။ :P
ဟိ ဟိ၊ Guide သင်တန်းတက်တုန်းက အဲဒီအကြောင်းတွေ သင်ဖူးတယ်။ မနည်းလိုက်မှတ်ရတယ်။ မင်းနာမည်တွေ မှားလွန်းလို့လေ။ ကိုဖူးနုသစ်လိုသာ သင်ပေးလို့ကတော့ ချက်ချင်းမှတ်မိမှာ။ သမိုင်းဆရာလုပ်မလား။ သမိုင်းကို မပျင်းအောင် ရေးတတ်လို့။ :P :D
အရေးအသားလေးက ကောင်းလိုက်တာ။မော်ဒန်ပို့စ် ပေါ့။
အမတို့အဖေက ရေလုပ်ငန်းလုပ်လို့ အမေက ဝါမဝင်မီမှာ ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့တကြိမ် ဝါထွက်မှာ မုံ့ဆန်းနဲ့ တကြိမ် တနှစ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ကျ ရေငန်ပိုင်ဦးရှင်ကြီး တင်ပါတယ်။ Unofficial Guid to ရေငန်ပိုင်ဦးရှင်ကြီး ရေးပါဦး။
မိုက်တယ်ဗျာ ရေးထားတာ။ မျက်စိထဲတောင် အနော်ရထာ Hip-Hop သမား လက်ရမ်းရမ်း ပြောသွားသလိုတောင် မြင်လိုက်သေးတယ်... ဟီ
ဆရာကြီးတွေ များပြလိုက်တဲ့ ပညာ ကျမဂျီးတော်ကြီး ကို မောင့်တင်တယ်
ပတ်ပြေးတာ တို့ သူ့ယောက်ဖကိုပိုင်ပီထင်ပြီးသွားတာ အသတ်ခံရတယ်လို့ များပြောလိုက်ရင် ကျမကိုကြက် မွေးနဲ့ လိုက်ရင်း အိမ်တွင်းအဖေကြီးဘုရားမလိမ် မိုးမလိမ်မာ အမိုက်အမဲ ဗုဒ္ဒဟူးသမီးကို ခွင့်လွတ်တော်မူပါဆိုပြီး မောင်တင့်တယ် အအေးပတ်အောင်ယပ်သွင်းမှာမြင်ရောင်မိတယ်။
ရေးထားတာ အရမ်းဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။ရာဇဝင်ကို ခေတ်စကားနဲ့ရေးထားတာ လန်းတယ်ဗျာ။ ဒီရာဇဝင်ကြားဘူးပါတယ်။ အိမ်မှာတော့ အဖေကမကိုးကွယ်ရဘူးဆိုလို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက အိမ်တွင်းနတ်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။
လန်းတယ်ဗျာ အရေးအသားကတော့ စာမေးပွဲပြီးသွားလို့ လက်စွမ်းပြနေထင်ပါ့
April 29, 2009 at 6:04 PM
အတွင်းမှာ ၃၇ ရုပ်
မဆံ့လို့ အပြင်မှာ ပုံထားတာက ၃၇ ရုပ်
April 30, 2009 at 11:35 AM
ကန့်လန့်ကာ နီနီလေးကို ဘာလို့ ပိတ်ရတာလဲဆိုတာ အခုမှ သိသွားတယ်။ သူများအိမ်မှာ တွေ့ဖူးတာ။ ZT ရေ မသီတာပြောသလို ဦးရှင်ကြီး အကြောင်းလည်း ရေးပါဦး။ ဖတ်ရတာ ကောင်းလို့ပါ။
အဖွားတို့ ခေတ်တုန်းက အိမ်တွင်းအုန်းပွဲ တွေ့ဖူးတယ်။ အမေကတော့ မလုပ်တော့ဘူး။ နောက်တော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် စာတွေဖတ်ရင်းနဲ့ သိလာတယ်။
အနော်ရထာက ထေရဝါဒကို ကိုးကွယ်ပြီး ဒီနတ်စနစ်ကို အားမပေးဘဲ ဖျက်သိမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာ။
April 30, 2009 at 2:13 PM
ညီမလဲယူသေး၊ ငါ့ကိုလဲ သတ်သေး၊ ပုပ္ပါးလောက်နဲ့ မရတော့ဘူး တဲ့။ နေပြည်တော်က VIP ရပ်ကွက်ကို အပိုင်စားပေးမှ ကျေနပ်မှာ တဲ့။ မသေခင်ကတည်းက သရဲသဘက်ဖြစ်နေတဲ့ အကောင်တွေ ထွက်ကြ တဲ့။
မော်ဒန် မောင်တင့်တယ်က ZT ကို တဆင့်ပြောလိုက်စမ်းပါ လို့ VZO နဲ့ လှမ်းပြောလို့ ဘလော့ဂ်မှာ တော့ခ် ခဲ့ပြီ။
May 1, 2009 at 8:02 AM
It isareally nice article. Wishing you that you can write more and more.
May 1, 2009 at 11:16 PM
ခေတ်သစ်အရေးအသားနဲ့ နတ်သမိုင်းက တယ်မိုက်ပါလား
ရာဇ၀င္ေပါင္းခ်ဳပ္ကို ကိုZT ကိုေရးခိုင္းျပီး သမိုင္းယူတဲ႕ေက်ာင္းသားေတြကို ေပးလိုက္ရင္ သူတို႕ စာက်က္စရာမလုိေတာ႕လို႕ အေတာ္၀မ္းသာၾကမယ္
ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ပညာေရး၀န္ၾကီးခန္႕မယ္ဗ်ာ း)
December 12, 2010 at 4:59 PM
ဆင်ကျားပေါ၏ တခြားသော အကြောင်းများ
လာရောက် လည်ပတ်သူ အများဆုံး မြန်မာ ဘလော့ခ် ၅၀ (၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီ)
ထူးထွေအံ့ရာ ပြည်မြန်မာ (၂)
အပျင်းပြေ ခေါင်းစားဖို့ (၂)
Phoo Nu Thit
2 in 1 ပရို ဂရမ်မာ
စစ်တုရင် ကစားသမားနှင့် စိတ်ကူး အပိုင်းအစများ
SARS ဖြစ်တုန်းက သင်္ကြန်
ပန်းရောင် နဲ့ အပြာရောင်
Myanmar Wikipedia - လတ်​တ​လောအ​ပြောင်း​အ​လဲ​များ
ကိုဧရာ နဲ့ မသီတာ
Pho La Nat Thar
Install Unicode 5.2 Compliant Font
Click on the image for instructions to install Unicode Font
Unicode 5.2 Compliant fonts
This blog used Myanmar font compliant to Unicode 5.2 standard. Unfortunately, Zawgyi-One and Ayar are not compliant with Unicode standard.
Please click on this link to see this list of Myanmar fonts compliant to Unicode standard running on Windows, Linux and Mac.
Nothing special. I am justalesser mortal. :D